WARBIXIN: Haaland, De Gea, Aguero & 8-da Saxiix Ee La Filayo In Ay Dhacaan Suuqa Xagaaga – Kooxda.com
HomeSuuqaWARBIXIN: Haaland, De Gea, Aguero & 8-da Saxiix Ee La Filayo In Ay Dhacaan Suuqa Xagaaga
April 11, 2021 Abdiwali Adan Jamac Suuqa, Wararka Maanta, Warbixino 0
Waxa fooda inagu soo haya suuqa kala iibsiga xagaaga iyada oo lagu jiro bilihii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga xagaaga dhamaadka xilli ciyaareedkan.
Dareenka kooxaha, Xiddigaha iyo taageerayaasha ayaa u jeedsan doona suuqa kala iibsiga iyada oo la filayo in ay saxiixyo waaweyn oo badan dhacaan marka uu furmo suuqa kala iibsiga xagaagu.
Kooxaha yurub ayaa isku diyaarinaya dhaq-dhaqaaqa suuqa kala iibsiga iyaga oo isha la raacaya xiddigaha ay doonayaan in ay la soo saxiixdaan marka uu dhamaado xilli ciyaareedkan.
Hadaba waxa aan warbixintan ku soo bandhigi doonaa 8-da saxiix ee la filayo in ay dhacaan suuqa xagaaga.
Lionel Messi – Manchester City/PSG:
Xiddiga kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayuu shaki ku jiraa mustaqbalkiisa kooxda Walina ma kala cada waxa dhici doona dhamaadka xilli ciyaareedkan waxana lala xidhiidhinayaa kooxaha Man City iyo PSG.
Labada kooxood ee Man City iyo PSG ayaa lala xidhiidhinayay xiddiga reer Argentine iyada oo labada kooxood doonayaan in ay baanka u jabiyaan xiddiga reer Argentine si xor ugu helaan.
2.Erling Haaland – Manchester City:
Halkee Ayuu Erling Haaland ku dambayn doonaa xagaaga?
Kooxaha Man City, Manchester United, Chelsea, Real Madrid & Barcelona ayaa dhamaantood lala xidhiidhinayaa saxiixa xiddiga reer Norway waxana la filayaa in uu xiddiga 20 jirka ah koox cusub ku biiro xagaaga.
Hadii ay Dortmund ku fashilanto in ay u soo baxdo champions League waxa la filayaa in ay saxiixa xiddiga ku dgaalamaan kooxo badan oo reer yurub ah kuwaas oo doonaya saxiixiisa.
Kooxda Man City ayaa haatan la aamisanyahay in ay tahay kooxda hogaaminayso tartanka loogu jiro saxiixa xiddiga oo ay u doonayan badalka Sergio Aguero oo qab xor ah uga tagay kooxda.
3.David de Gea – PSG/Real Madrid
Wakhtiga David de Gea ee Man United ayaa u muuqda mid soo dhamaaday iyada oo Solskjaer dookhiisa 1-aad ee goolkiisa ka dhigtay Dean Henderson waxana ay Man United suuqa dhigtay Goolhayaha reer Spain.
Goolhayaha oo mushahar aad ah ka qaata kooxda ayaa lala xidhiidhinayaa kooxaha Real Madrid iyo PSG kuwaas oo ku dagaalamaya saxiixiisa iyada oo Real dib u soo cusboonaysiisay xiisaha Goolhayaha oo muddo dheer lala xidhiidhinayo.
4.Georginio Wijnaldum – Barcelona:
Xiddiga khadka dhexe ee Georginio Wijnaldum ayaa xor noqon doona dhamaadka xilli ciyaareedkan waxana lala xidhiidhinayaa in uu isaga tagayo kooxda Liverpool kadib markii uu diiday in uu heshiis cusub u saxiixo kooxda.
Georginio Wijnaldum ayaa lala xidhiidhinayaa kooxo badan laakiin Barcelona ayaa ah kooxda ugu cad-cad sxiixa xddiga reer Holland iyada oo uu Ronald Koeman si aad ah u doonayo in uu yimaado Camp Nou.
5.Sergio Aguero – Chelsea/Barcelona
Xiddiga weerarka ka ciyaara ee Sergio Aguero ayaa dhankiisa xor noqon doona dhamaadka xilli ciyaareedkan waxana haatanba la xaqiijiyay in uu isaga tagi doono kooxda Man City dhamaadka xilli ciyaareedkan.
Sergio Aguero ayaa haysta xiisaha kooxo badan oo reer yurub ah kuwaas oo doonaya saxiixa xiddiga laakiin waxa ugu cad-cad saxiixiisa kooxaha Chelsea Iyo Barcelona kuwaas oo doonaya saxiixiisa.
6.Ben White – Manchester United/Liverpool:
Daafaca kooxda Brighton ayaa xilli ciyaareedkan ku celiyay qaab ciyaareedkii fiicnaa ee uu soo bandhigay xilli ciyaareedkii hore waxana uu soo jiitay indhaha kooxaha ugu waaweyn Premier League.
Kooxaha Liverpool iyo Man United ayaa suuqa u gali doona daafac cusub suuqa xagaaga waxana ay labada kooxoodba isha ku hayaan xiddiga reer England.
Xiddiga 23 jirka ah ayaa dagaal adag dhex dhigi doona kooxaha ugu taariikhda weyn England iyaga oo ku dagaalami doona saxiixiisa dhamaadka xilli ciyaareedkan.
7.David Alaba – Real Madrid:
Alaba ayaa ka mid ah xiddigaha ugu fiican wakhti xaadirkan kana ciyaari kara dhawr boos oo daafaca iyo khadka dhexe ah waxana uu ka tagi doonaa kooxda Bayern Munich dhamaadka xilli ciyaareedkan.
David Alab ayaa lala xidhiidhinayay kooxo badan laakiin Real Madrid ayaa ah kooxda sida weyn loo filayo in uu qaab xor ah ugu biiro dhamaadka xilli ciyaareedkan.
8.Raphinha – Liverpool:
Kooxda Liverpool ayaa ku dhibaatootay dhanka weerarka xilli ciyaareedkan iyada oo uuna Sadio Mane soo bandhigin qaab ciyaareed lagu qanco kuna dhibaatoonayo in uu saamayn ku yeesho kulamada kooxdiisa.
Klopp ayaa la filayaa in uu suuqa u galo xiddig ka ciyaara Garabka weerarka waxana uu xiddiga Leeds United ee Raphinha u calaamadsaday xiddig wax weyn ku soo kordhin kara kooxdiisa xilli ciyaareedka dambe.
Sii Akhriso: U Gaar Ah Dumarka: Su’aalo Xiiso leh Oo Aad Waydiin Kartid Gacaliyayaaga Waliba Qaligiisa Kugu Dhawaynaya, Ha Kaga Waaban Hadda Waydii.
Ousmane Dembele Oo Ka Hadlay Mustaqbalkiisa Barcelona
Arsenal Oo Garaacday Sheffield United & Gunners Oo Ku Soo Laabatay Wadada Guulaha Premeir League.